🥇 ▷ ScreenshotActions waxay fududeyneysaa in la wadaago isla markaana lala falgalo shaashadda macruufka ✅
ScreenshotActions waxay fududeyneysaa in la wadaago isla markaana lala falgalo shaashadda macruufka
Waxaan qaataa shaashado aad u tiro badan maalinteyda iPhone maalinba maalinta ka dambeysa waxaan awood u leeyahay inaan qabsado shaashadeyda sida faylka sawirka oo kale. Qaar kale oo badan ayaa saaran markabkeyga, laakiin haddii aan qaado shaashado badan oo shaashad ah iyo haddii kalaba, hal shay oo aan dhammaanteen isku waafaqi karno ayaa ah in Apple Waxaad samayn kartaa muuqaalka soo qabashada shaashadda si aad u dareen badan.
Si loo galo Screenshot, goob jabsi ay dhowaan si bilaash ah ugu sii daayaan soosaaraha iOS P2KDev taas oo u sahlaysa dadka isticmaala inay la wadaagaan oo ay la falgalaan shaashadda ka dib markii la sawiro.
Dhamaan shaashadaha waxaa lagu keydiyaa kamaradahaaga Camera ka dib markaad qaadatid, oo marwalba waad booqan kartaa barnaamijka Sawirrada markii aad diyaar u tahay inaad la wadaagto ama kula shaqeyso shaashadda sawirkaaga. Dhanka kale, sameynta taasi waxay u baahan tahay talaabooyin ka badan inta loo baahan yahay, waana meesha ay ScreenshotActions ka soo galaan.
Sida lagu muujiyey shaashada shaashadda kore, ScreenshotActions wuxuu keenaa qaar ka mid ah gaabin-ka-faa iidooyinka ugu badan ee wadaagidda iyo is-dhexgalka si toos ah qaybta macruufka, halkaasoo shaashadda shaashadda lagu muujiyo geeska bidix ee hoose ka dib markii sawir la qaado. .
Marka la rakibo, isticmaaleyaashu way awoodaan Touchez oo qabtaan shaashada shaashadda isla markaana ay furtaan menu u oggolaanaya xulashooyinka soo socda:
Ku dhaji sawirka Imgur ka dibna nuqul ka sameyso URL-ga Imgur Clipboard-ka
La wadaag sawirrada wargeysyada macruufka ah
Nuqul ka sameyso Clipboard-ka ka dibna tirtir
Tirtir muuqaalka gabi ahaanba
Haddii aad damacsan tahay inaad sawirka ku dhejiso santuuqa sheekada ama aad qoroto meel ku dhig macruufka ama aad u dirto qof xiriiriyaha ‘Imgur’ halkaas oo sawirada la soo dhaafay aan la taageerin, goobtani waxay si fudud u fududaynaysaa inaad la wadaagto oo aad la shaqeyso shaashadda sawirada iyadoo aadan ka bixin dulucda aad rabto. horey u soo galay
Soosaarahu wuxuu qorsheynayaa inuu ku daro waxyaabo dheeraad ah ScreenshotActions mustaqbalka, laakiin ma jiraan wax tilmaamo ah oo ku saabsan.
ScreenshotActions kuma imaan wax ikhtiyaar ah oo lagu habeeyo, sidaa darteed waxa aad ku aragto dhamaadka waa waxa aad heshid. Kuwa xiiseynaya isku dayga ScreenshotActions waa awoodaan uga soo dejisan si bilaash ah kaydinta Packix Iyada oo loo marayo maamulaha xirmada aad door bidday, iyo tweak waxay taageertaa dhammaan aaladda iOS 13 Jailbreak.
Ma rakibi doontaa ScreenshotActions? Noosheeg sababta ama sababta aan qeybta hoose ee faallooyinka.